Dumarka kalluumeysatada ah ee UK - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Joanne Coates and Hannah Stacey
Image caption Sophie Wear
Kalluumeysiga waa shaqo aad u adag lana xiriirta in badda saacado badan lagu maqnaado, shaqaduna waa mid culus oo muruq iyo tamar badan u baahan, waxaana inta badan lagu yaqaanaa ragga, balse hadda waxaa aad usoo kordhaya dumarka kalluumeysiga ka shaqeeya.
Waxaa ka mid ah dumar badan oo ku nool koonfur galbeed England , kuwaasi d ka shaqeeya badda, iyaga oo soo jilaabta kalluunka iyo aargoosatada, ama siyaabo kale oga shaqeeya arrimo kalluumeysi la xiriira.
Sophie Wear - Jalaabasho
Lahaanshaha sawirka Joanne Coates and Hannah Stancey
Image caption Sophia oo aargoosato soo jalaabatay
Gabadhan waxa ay ka mid tahay shaqaalaha saaran doon kalluumeysi oo dul socota wabiga Helford, Cornwall, waxana ay ka hadlaysaa dareenkeeda ku aadan shaqada ay qabato.
"Markasta waxaa jira fikradaha qadiimka ah ee ah in kalluumeysiga uu yahay shaqo ay ragga oo kaliya qabtaan, dumarkana aysan aadin kalluumeysiga" ayay tiri.
"Waxaan aaday dukaan si aan usoo iibsado barmiilka shidaalka iyo qalab kale oo doonta loogu talo galay, ninkii aan ka iibsanayay si daran ayuu iisoo eegey, waan necbahay in la ii maleeyo gabadh jilicsan, balse dumar ahaan weey adagtahay in waxyaabaha qaarkood aad qaadid" ayay intaasi raacisey.
Sophie waxa ay sheegtay in uu xitaa mar qaniinay nooc ka mid ah kalluunka, ahaydna qaniinyo aad u xanuun badan, balse waxa ay ku adkaysanaysaa in ay aad u jeceshahay shaqadeeda.
Katherine Joy - Warshad Kalluun
Image caption Katherine waxa ay ka shaqaysaa warshad kalluun
Waa haweeney kale oo ka shaqaysa arrimaha kalluunka, waxa ay ka hawlgashaa warshad kalluunka oo ku taala magaalada Plymouth, Devon.
"Waxaan ka shaqo bilaabay Tesco, waxaan joogay todobo sano, xirfado kala duwan ayaan bartay oo ku saabsan kawaanlenimada iyo kalluunka" ayay tiri Katherine.
"Waa ay adagtahay in aad dumar ku aragto halkan, dadka qaarkood ayaa ii yimaada oo su'aalo i weeydiiya, oo yiraahda maxaad halkan ka qabanaysaa?" ayay tiri.
Katherine shaqadeeda waxaa ka mid ah in ay miisaanto kalluunka, in ay haragga iyo caloosha ka bixiso kalluunka, baakadayso kadibna ay ku gurto qaboojiye weyn oo meesha yaala.
Annie Gilbert - Naaquude
Image caption Annie Gilbert waa naaquude doon kalluumeysi
Haweeneydani waxa ay naaquude ka tahay markab kalluumeysi oo ganacsi ah, kaasi oo ka hawgala xeebta Jurassic, waxayna kasoo jeedaa magaalada Poole, ee degmada Dorset ee UK.
"Ian oo ahaa ninkeygii hore ayaa maalin i weeydiiyey in aan jeclaan lahaa in aan ka mid noqdo shaqaalihiisa markabka, markiiba waan jecleystey fikradaas, wixii markaas ka dambeeyey maalmo kooban oo kaliya ayaan ka baaqday kalluumeysiga muddo 13 sanno ah" ayay tiri Annie.
Waxa ay sheegtay in xiliyada ugu daran ee soo mara ay yihiin marka ay maalmo dhan badda ku maqnaato, haddana kalluunka lasoo helayo uu aad u yaryahay. Waxa ay intaasi ku dartay in mararka qaarkood shabaagta ay ka buuxsamaan qashin, taasi oo waqti badan ku qaadata in la nadiifiyo.
"Waligeey waxaan jeclaa wiifoowga, marka waan jeclahay dabeylaha daran in aan ku shaqeeyo ee badda ka dhacaya, waxaa jirta in markabka uusan lahayn suuli, marka aniga kama xishoodo taas, waxa kaliya een ka helo waa marka ay cadceeda soo baxayso iyo marka ay dhacayso waxaad u arkaysaa si nadiif ah, waana qurux miiran" ayay yiri Annie oo intaasi ku dartay in shaqadeeda ay aad u jeceshahay.
Angela Harrison - Kawaanle
Image caption Angela Harrison waxa ay ka shaqaysaa kawaanka kalluunka
Waa haweeney kale oo ka shaqaysa arrimaha kalluumaysiga, Angela waxa ay ka mid tahay mulkiilayaasha shirkad ka ganacsatada kalluunka oo ka dhisan magaalada yar ee xeebta ku taala ee Looe, ee degmada Cornwall , England.
Iyada iyo walaasheed Jackie waa jiilkii shanaad ee ku jira ganacsigan kalluumeysiga.
"Lacag badan maanan heysanin, balse markasta qaboojiyaheena waxaa ka buuxay kalluun noocyo kala duwan ah, subax kasta waxaan tagi jirney suuqa kalluunka Looe halkaas oo kalluunka laga helo uusan jirin wax la mid ah" ayay tiri
"Waa shaqo ragga u gaar ah, waana in aad ahaataa qof xoog leh, oo xamaali kara sanduuqyo dhan 25 kiilo garaam" ayay intaas ku dartay.
Tina Hicks - Maareeyaha Dekedda
Image caption Tina Hicks waa maareeyaha dekadda Looe
Tina waa maareeyaha dekada Looe, ee degmada Cornwall, waxay sheegtay in la weeydiiyey in ay jeceshahay in ay maareeyo ka noqoto dekadda, xilkaas oo ay aqbashay, balse waxa ay dooratay dareeska ragga in ay xirato marka ay shaqada ku jirto.
"Barigii hore shaqada maareeyaha waxa ay ahaan jirtey mid shaqo badan u baahan, balse dhawaanahan wax kasta waa is badaleen, waa shaqo xafiis , mana ahan mid dhib badan" ayay tiri.
Lorna Lawrence - Dabato
Image caption Lorna Lawrence waxa ay ka mid tahay dumarka kalluunka soo jalaabta
Gabadhani waa mid kale oo ka mid ah kuwa ka shaqeeya arrimaha kalluumeysiga, muddo shan sanno ah ayay ku kalluumeysanaysay doon uu aabaheed leeyahay wabiga Helford ee degmada Cornwall
"Sannadihii hore ee shaqada aad ayay u adkaayeen, qaboowga gacmaha ma ahayn mid loo adkaysan karay, balse sanadkii labaad jirkaaga waxa uu la qabsanaa dhibaatada, waxa ugu daran waa in aad kacdaa xili hore aroortii, kadibna su'aalo ayay ku weeydiinayaan kalluumeysatada kale ee ragga ah, balse aniga waxaan aamisanahay in dumar kale oo badan ay shaqadan kasoo bixi lahaayeen haddii aysan ku mashquulsanayn qoysaskooda" ayay tiri.
Gabadhan waxa ay sheegtay in ay hadda kalluumaysiga joojisay maadaamaa ay u baahnayd in ay qoys samaysato, caruurna xanaanaysato.
Sheila Taylor - Shiraacasho
Image caption Sheila Taylor iyada xitaa doonta wadata, shabaagtada soo jiidda.
Sheila ninkeeda ayaa kalluumeysato ah, iyadana waxa ay ka caawisaa in ay soo jiido shabaagta kalluunka.
"Waxaan isticmaalaa doon, shabaagta kalluunka galay oo aad u culus ayaan badda kasoo bixiyaa" ayay tiri Sheila oo intaasi ku dartay in ay ka hesho midabada quruxda badan ee kalluunka.
Carly Daniels - Aargoosatada
Image caption Carly Daniels waxa ay madax ka tahay xarun ugxanta loo dhigo aargoosatada, laguna tarmiyo
Waxa ay ka tirsan mac-hadka cilmi-baarista aargoosatada, halkaasi oo qeyb ka mid ah ay maamule ka tahay.
"Aargoosatada waa noole cajiib ah, garaam ahaan waa kalluunka ugu qiimaha badan xagga lacagta UK oo dhan, waxayna muhiim u yihiin kalluumaysataya" ayay tiri Carly.
Waxa ay intaasi ku dartay in dumarka ay qaban karaan shaqooyin la mid ah kuwa ay ragga qabtaan.
Xarunta ay madaxda ka tahay oo sidoo kale ugxaanta u taalo aargoosatada oo lagu tarmiyo ayaa dadka ka shaqeeya waxaa u badan dumarka.
Carly waxa ay hadalkeeda kusoo gabogabaysay in markii ay jaamacadda kasoo baxaysay, aysan waligeed ku fikirin in ay ka shaqeyso aargoosatada, balse ay tahay shaqo ay aad u jeceshahay.
Waddankee ugu horeeya sinaanta ragga iyo dumarka?